စက် blasting ဝါယာကြိုးကွက်ခါးပတ်, shot - တရုတ် Qingdao Antai အကြီးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ
စက် blasting ကြိတ်စက်ပေါ်ကိုရိုက်ချက်
စက် blasting ချိတ်အမျိုးအစားရိုက်ချက်
စက် blasting သံမဏိပိုက်အတွင်း / ပြင်မြို့ရိုးကိုရိုက်ချက်
ဆလင်ဒါစက် blasting ပစ်သတ်
စက် blasting တစ်လိုင်းပြေးရထားပေါ်ကိုရိုက်ချက်
စက် blasting ခါးပတ်အမျိုးအစားရိုက်ချက် Tumble
စက် blasting စည်ရိုက်ချက်အလှည့်
စက် blasting Rotary စားပွဲပေါ်မှာရိုက်ချက်
စက် blasting ဝါယာကြိုးကွက်ခါးပတ်ကိုပစ်ခတ်
Bogie (စားပွဲတင်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း) ကိုပစ်ခတ်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက်
စက် blasting လမ်းမျက်နှာပြင်ကိုပစ်ခတ်
စက် blasting သည်အခြားအမျိုးအစားရိုက်ချက်
အခြားအ foundry ကိရိယာများ
စက် blasting roller ပေါ်ကိုရိုက်ချက်
စက် blasting သံမဏိပိုက်ပြင် & အတွင်းမြို့ရိုးကိုရိုက်ချက်
စက် blasting လှိမ့စည်ရိုက်ချက်
bogie (စားပွဲပုံဖမ်းတွန်းလှည်း) ကိုပစ်ခတ်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက်
သတ္တုဝါယာကြိုးကွက်ခါးပတ်အမျိုးအစားသို့ကာစ်သံ Cast, Cast သုံးရန်သံ Cast, အောက်ဆီဂျင်-လျှံဖြတ်တောက်အစိတ်အပိုင်းများ, (မော်တော်ယာဉ်, alimentary, ပရိဘောဂ, အလင်းရောင်, ဆက်သွယ်ရေး, လျှပ်စစ် tools များလယ်ကွင်း, etc) ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက်လူမီနီယမ်နှင့်သတ္တုစပ်-Cast သေဆုံးသင့်လျော်သည် Shot, သံ Cast, ကြေးဝါပုံသွင်းအပိုင်းပိုင်းကိုသွန်းလေ၏။
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်နှစ်လျှင် 300 အစုံ
Delivery ဆိပ်ကမ်း: Qingdao ဆိပ်ကမ်းကိုတရုတ်
Delivery အချိန်: 30working ရက်အတွင်း
ဇာစ်မြစ်၏နေရာအရပ်: ရှန်ဒေါင်း, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
သတ္တုဝါယာကြိုးကွက် Belt အမျိုးအစား ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက် Shot
ဝါယာကြိုးကွက်ခါးပတ်စက်မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်များကိုပေးစွမ်းရှိသမျှသည်သတ္တုအပြောင်းအလဲနဲ့လိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်ထိရောက်သောစွမ်းဆောင်မှုကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့သေ Cast, မော်တော်ကားဘီး, ferrous နှင့် Non-ferrous Cast, weldments, သင်္ခါရနှင့်ပိုပြီးကိုင်တွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဝါယာကြိုးကွက်ခါးပတ်စနစ်များလည်းအပူကုသခဲ့ကြကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
လူမီနီယမ်သေ-Cast နှင့်သတ္တုစပ် (မော်တော်ယာဉ်, alimentary, ပရိဘောဂ, အလင်းရောင်, ဆက်သွယ်ရေး, လျှပ်စစ် tools များလယ်ကွင်း, etc)
ပုံစံ QWD60 QWD80 QWD100 QWD120
အကျယ် (မီလီမီတာ) 600 800 1000 1200
မြန်နှုန်း 0.5-4 0.5-4 0.5-4 0.5-4
စွမ်းရည်4* 1204* 1204* 1804* 250
အဆိုပါအလုပျ-အပိုင်းပိုင်းမြင့်မားသော wear ခုခံအတူဝါယာကြိုးကွက်ပေါ်ကိုအပေါ်ထားရှိနေကြတယ်, ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုအခန်းထဲကမှတဆင့်တစ်ခုတည်း pass အတွက်အထက်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှစ်ဦးစလုံးပျက်သောစပါး။
သတ္တုဝါယာကြိုးကွက်ပေါ်ကိုနှင့်ပေါက်ကွဲမှုဘီးလည်ပတ်၏တိုးတက်မှုကိုမြန်နှုန်းဟာအင်ဗာမှတဆင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရထားဘီးနှင့် installed လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၏အရေအတွက်မော်ဒယ်များပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
Qingdao Antai အသုံးဝင်သောအကျယ်၏ 1,500 မီလီမီတာအထိ 500 မီလီမီတာတစ်ပိုဒ် width ကိုအတူငယ်များအနေဖြင့်အများအပြားမော်ဒယ်များထုတ်လုပ်သည်။
အလုပ်အပိုငျးပိုငျးတင်ချကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်သတ္တုဝါယာကြိုးကွက်ပေါ်ကိုထံမှရှေ့တော်၌, သို့မဟုတ်အပြီး, ဒါမှမဟုတ်စက်ရုပ်မှတဆင့် positioned အလိုအလျောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များမှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
စက် automated နှင့်မြင့်မားသောအကျိုးဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။
အလိုအလျောက်ဂေါ်လီလုံး၏ကုသမှု, ကျောက်နှင့်ဘိလပ်မြေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ, သဘာဝကျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းအဘို့အစဉ်ဆက်မပြတ်သတ္တုဝါယာကြိုးကွက်ပေါ်ကိုနှင့်အတူပေါက်ကွဲမှုစက်ပစ်သတ်။
အလုပ်အပိုငျးပိုငျးပေါက်ကွဲမှုအခန်းတစ်ခန်းအားဖြင့်တစ်ခုတည်းကျမ်းပိုဒ်များတွင်ပျက်သောစပါးတို့သည် wear မြင့်မားသောခုခံသတ္တုဝါယာကြိုးကွက်ပေါ်ကိုနှင့်ရိုက်ချက်အပေါ်ချထားပါသည်။
အဆိုပါနံပါတ်နှင့်ပေါက်ကွဲမှုဘီးများအနေအထား (အချို့ကိစ္စများတွင်ကလည်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ခြမ်းအချို့နဲ့အခြားကိစ္စများတွင်, အထက်ဘက်သာပေါက်ကွဲမှုမေတ္တာရပ်ခံနေသည်) ကဂျီသြမေတြီနှင့်အလုပ်အပိုငျးပိုငျးပေါ် မူတည်. ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ရိုက်ချက်ပေါက်ကွဲမှုစက်များတွင်အသုံးပြုရိုက်ချက်၏သငျ့လျြောသောစညျးမဉျြးစညျးကမျးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အမျိုးအစားနှင့်အတူကစကျင်ကျောက်ကျောက်များနှင့်ဘိလပ်မြေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် "ချုံ-Hamer" အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် "ရှေးဟောင်း" အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောမျက်နှာပြင်ချောထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။
စက်တွေ blasting အတော်များများ type ကိုဝါယာကြိုးကွက်ပေါ်ကိုခါးပတ်ကိုပစ်ခတ်
စက်ကသင်၏ workpiece ဘို့မသင့်တော်ပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါ infromation ပြောပြကျေးဇူးပြုပြီး:
1) သင် workpiece အဘယျသို့သောရှင်းလင်းကြလိမ့်မည်နည်း
workpieces ၏ 2) အရွယ်အစား (အရှည်, width နဲ့နိမ့်ဆုံး workpiece အများဆုံး workpiece, အလျား, width နဲ့ height ၏အမြင့်?)
အများဆုံးနှင့်အနည်းဆုံး workpiece ၏ 3) ဘယ်နှစ်ယောက်အလေးချိန်?
သင့်ရဲ့ infomation အဆိုအရအသင့်တော်ဆုံးစက်တွေသင့်ရဲ့ workpieces များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါလိမ့်မည်။
ယခင်: bogie (စားပွဲပုံဖမ်းတွန်းလှည်း) ကိုပစ်ခတ်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက်
နောက်တစ်ခု: QWD800 Wire Mesh Belt Conveyor Shot Blasting Machine
လူမီနီယမ် Shot စက် blasting
Beam ကိုပေါက်ကွဲမှုစက် Shot
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက် Shot continuous ကြိတ်စက်ပေါ်ကို
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက် Shot နှစ်ချက် Hook
H ကို Beam ကို Sho t ကိုပေါက်ကွဲမှုစက်
H ကို Beam ကိုသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ Shot blasting စက်
H ကိုပုဒ်မသံမဏိပေါက်ကွဲမှုစက် Shot
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက် Shot ကြိုးကွင်း Hook အမျိုးအစား
စက် blasting ဆွဲထား Chain Shot
ပေါက်ကွဲမှုစက် Shot ဆွဲထား Chain အမျိုးအစား
စက်ပျော်စေချိတ်အမျိုးအစား Shot ပေါက်ကွဲမှု
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက် Shot Hook အမျိုးအစား
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက် Shot တစ်လိုင်းပြေးရထား Hook အမျိုးအစား
Q38 ပေါက်ကွဲမှုစက် Shot
Q69 Shot blasting စက်
Qh69 Shot စက် blasting
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက် Shot ကြိတ်စက်ပေါ်ကို
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံသည်စက် blasting shot
သံမဏိ Beam သည်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက်များ
စက် blasting လူပျို Hook Shot
ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စက် Shot သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ
Q324 smaller tumble belt shot blasting machine
Adress: အမှတ် 867, ရာစုလမ်း, Huangdao ခရိုင်, Qingdao, ရှန်ဒေါင်း, တရုတ် (266400) ။
E-mail ကို: lan.ji@qdantai.com